ISEMTHETHWENI INGCEBISO KWI-MBOLEKO
Oko kwenza ukuba kukho libazisa kwi-mboleko. Ingaba kuya kukunceda kakhulu yaneleyo, ukuba awukwazi lihlawule ngenxa isivumelwano intlawulo qho ngenyanga. Ukuba uthathe ngaphandle kwaye threaten collectors. Ezi kunye nezinye ezininzi imibuzo ingaba wabuza ka-borrowers abo unee-mali iingxaki ukubuyela imali-mboleko imali. Ngamnye ingxaki yemali-mboleko. Kuba favorable isisombululo ye-credit mba kufuneka isemthethweni ingcebiso kwi-mboleko, abo baya kukuxelela indlela engcono ukuqhubeka kwi-onikiweyo imeko.
Ngamnye-mboleko isivumelwano uchaza inkqubo nguwe lokuphinda uhlawule. Kuqala ube sowuzinzile izohlwayo, ngoko ke inzala, kwaye ke kuphela, umzimba-mboleko. Phantsi kwezi iimeko, abanye borrowers ukuhlawula imali-mboleko akakwazi ukwenza naluphi na uluvo. Ukususela inqaku le-Zasekuhlaleni ikhowudi ukunika ilungelo kwentlawulo fines ekuhambeni ye-linge.
Kuba abanye abathengi owamkelekileyo sifana ukhetho lomgaqo-restructuring ityala yi-installments okanye lizaku kucinywa intlawulo, ebizwa-«vacation credit». Ukufumana restructuring kufuneka isicelo Bank kunye zahlukeneyo semthethweni-imeyili, nto leyo iza kananjalo ukunceda ukwenza a lawyer kwi-banking imicimbi.
Isemthethweni ingcebiso kwi-mboleko kwi-litigation kunye Bank.
Zinika ibango enkundleni, iibhanki significantly mali isixa-mali ityala ngokusebenzisa unreasonable fines. Ukuba borrower luthathe iifama i-egqithileyo indawo okanye akakwazi kuhamba enkundleni kwetyala, ezifana amabango ingaba uvuma kwi-ngokupheleleyo. Kangangokuba, isixa-mali ityala unako ukusebenzisa amaxesha aliqela.
Ukuba Bank wathabatha borrower ukuba inkundla ayanelisekanga rhoqo njengoko engalunganga njengokuba kubhaliwe babe ngathi ayixhasi namnye ngomhla wokuqala glance. Kwimeko ilahlekile Bank Statute ka-kwezixhobo zokusebenza, kuyenzeka ukuba ukuphumelela kwaye kuza ngaphandle»unscathed». Kukho inani izigqibo lesiqu inkundla. Ukongeza, inkundla kuqala isehlo babe — umphinda-phinde ngo ukunciphisa isixa-mali izohlwayo, kodwa oku kufuneka kuchazwe kwi-ukubhalwa objections ukuba kuya kunceda ukwenza a lawyer iimali-mboleko.